भाईरल गायक हेमराज भुजेल गहिरो प्रेम सम्बन्धमा, बताए केटी फकाउने तरिका (भिडियो) «
भाईरल गायक हेमराज भुजेल गहिरो प्रेम सम्बन्धमा, बताए केटी फकाउने तरिका (भिडियो)
प्रकाशित मिति : १५ पुष २०७७, बुधबार ११:०९
बिहे गर्नकोलागी केटी फकाउने सबैको आफ्नै आफ्नै तरिका हुन्छ । कसैले केटीलाई मन पर्ने कुराहरु किनमेल गरिदिएर फकाउँछन् त कसैले म तिमीलाई माया गर्छु, जीवनभर सुखैसुखमा राख्छु भनेर पनि फकाउने गर्छन् । कसैले जीवनभरी नै भनेको मान्ने छु भनेर फकाउँछन् भने कसैले स्वतन्त्र जीवन जीउन दिनेछु भनेर फकाउँछन् । तर पछिल्लो समयमा गीत गाएरै भाईरल बनेको हेमराजको भने आफुले बिहे गर्ने केटीलाई फकाउने तरिका अलि फरक छ ।
उनको यो कुरा सुन्दा निकै नै रमाईलो र उत्तिकै हाँसो लाग्दो पनि छ । तर यो साँचो पनि हो । केटी फकाउनकोलागी सबैलाई एकान्त ठाउँ नै चाहिन्छ । यस्तो कुरा जानेका हेमराजले त्यति गर्दा पनि केटीले मानेन र म तिमीसंग बिहे गदिन भिनन् भने के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्,‘मान्छ नि किन मान्दिनन् ? गालामा चुप्पा खाएपछि पनि मान्दिनन् होला त ? यदि मानिन् भने कसेर ६ झापड हिकाउने नी । अनि त मानि हाल्लिछन् ।’ उनको यो केटी फकाउने तरिका उनैको आवाजमा सुनौं । भिडियो हेर्नुहोस ।